पानीमा बंगलासँग 1 15 सर्वश्रेष्ठ होटलहरू
आश्चर्यजनक माल्डिभ्स: पानी बंगला
व्यक्तिगत बंगला - पानीमा स्वीकारी-होटल
प्रमोदवन टापु रिसोर्ट र स्को *
Shangri-La को Vellingli रिसोर्ट र एसपीए, माल्याण्ड *
फर्मन्ट माल्भेडिभ्स, सिरुरू fne fhushi *
ग्रान्ड पार्क कोड कोड कोड, माल्दिभ्स *
एक उष्णकटिबंधीय प्रमोदविक टापुमा मैत्री थाई आतिथ्य अतुलनीय लक्जरी र प्राकृतिक सौन्दर्यको साथ छेड्छ।
होटल माल्डिभ्स बाईमा मुलुकको टापुमा अवस्थित छ, माल्दिभ्समा युनेज युनेसिंग युनेसिंग युनेनिंग रिजोर। घरेलु उडानमा पुरुष वा2minutes मिनेट टाढाको minutes 35 मिनेट मात्र हो। Drawanda एयरपोर्टबाट 10 मिनेटको गति डु boat ्गामा।
लक्जरी समुद्री तट, पानी र निवासभरमा भित्ताहरू पर्खिरहेका छन् टापुमा तिर्खा तिर्खादार भाँडा र मनोरन्जन। समुद्री बासिन्दाहरूले भरिएको "घर" रीफ। डेभाराना एसपीएले नरिवलको हलम्स बीच विलासी उपचार कोठा प्रदान गर्दछ, र सेवाहरूको पूर्ण दायराले कुनै दक्षता पूरा गर्नेछ।
सौर प्यानल, स्थानीय पानी पिउने पानी र वन्यजन्तु संरक्षण परियोजनाहरूले वातावरणीय मैत्री गतिविधिका लागि बुँदाहरू थप्दछन्। " Elegragra। हे। K
"अद्भुत स्पा, पानी खेलहरूको लागि उत्कृष्ट अवस्था; एक अद्भुत, रमाईलो टोलीको साथ धेरै पेशेवर डुबाउन्ट सेन्टर "त्रिपोविटविशोर
मा वेबर-सिड्चट्लीलाई अस्वीकार गर्नुहोस्:
हिन्द महासागरमा अवस्थित AMOL महासागर र टापुहरू, एक विदेशी मौसम, घाम चरित्रहरू र कोरल चट्टानहरूमा स्नडुलिंगहरू आकर्षित गर्दछ।
शोकित माल्भेडहरू समुद्रको अजुरज पानीको छेउमा लामो हिउँ-सेतो समुद्री किनारहरू द्वारा लोभ्याउँदछन् र नमस्कारकारी प्रकृति। पर्यटकहरु जसले प्रमोदवनको बिचमा आरामदायी अवसरहरू खोज्दैछन्, धेरै शान्त र एक्लो लागुनहरू भेट्टाए। प्रलोभन पानी कोरल राज्य परिष्कृत गोतालमा समेत प्रभावित हुन्छ।
माल्दिटी वास्तुकलाको विशेषता तत्व यस क्षेत्रको लागि पानीमा परम्परागत बंगाउ हो। लामो समयदेखि टापुका बासिन्दाहरू स्टेलल्टहरूमा घरहरू निर्मित, समुद्री किनारमा थिइन्। तिनीहरू समुद्रको किनारमा धेरै मिटरहरूको दूरीमा अवस्थित छन् र पियरको मद्दतको साथ किनारमा जडित छन्।
घरका घरहरू दैनिक गतिविधिको सुविधाका लागि निर्मित थिए, जसमा, अन्य चीजहरूको बीचमा माछा मार्नु। माछा मार्ने डु boats ्गाहरू दाँत मा दाँया। सागर पानी चुपचाप चुपचाप ल्याउनमा यहाँ कुनै ठूलो छालहरू छन्, त्यसैले पानीमा जीवन शान्त र नाप्छ।
के तपाइँ बिहान कोमल सर्फको आवाजलाई ब्यूँझन चाहानुहुन्छ, र तपाईं तुरून्त लम्बनको तातो अजुर पानीको पानीमा उफ्रिनुहुन्छ? माल्दिभ्स भ्रमण गर्ने र यो आश्चर्यजनक देशको रिसोर्टको बिचमा बंगलमा बस्न निर्णय लिनुहोस्।
<< P> आज, असंख्य टापुहरूमा लक्जरी होटलहरूले आफ्ना पाहुनाहरूलाई प्रशस्त, आरामदायक र आधुनिक कोठा मात्र प्रदान गर्दैन। माल्दिभ्समा धेरै होटल जटिलहरूले पानीको बंगलूनहरू - ढललाई स in ्ख्याको सर्तमा रमाइलो गर्ने अवसरको साथसाथै पाहुनाहरू र सभ्यताका सबै फाइदाहरू मिल्दोजुल्दो सम्बन्धमा पाहुनाहरूलाई दिन्छन्।
धेरै भिलाहरू आंशिक रूपमा ग्लोज्ड फ्लोर हुन्छ, जसले तपाईंलाई तपाईंको कोठामा समुद्री तलाको दृष्टिकोणबाट टाढा राख्दछ, विदेशी फलहरूबाट आवासक फलबाट टाढा निस्केनन्। तपाईंको व्यक्तिगत बुन्डाको टेरेसबाट, तपाईं सिधा पानीमा उफ्रिनुहोस् र पूर्ण लापरवाहीमा पौडिन सक्नुहुन्छ - तपाईंको खुट्टामुनि बलुवा तट।
माल्दिभ्स संसारमा सबै भन्दा राम्रो समुद्री हो जसले एक मिठो लापरवाह विश्राम दिन्छ। सेतो मखमल बालुवा, नरम छालहरू, पोखरी भन्दा तातो छ। नरिवल पनि यहाँ स्वादहरू छन्! एक व्यक्तिगत बंगलामा बसोबास गर्दै, तपाईं प्रमोदवन आनन्द खोज्नुहुनेछ र मेगालोपोलिसको ग्वाइजबाट विश्राम लिनुहुनेछ। आरामदायक उष्णकटिबंधीय बंगलाहरू माल्दिभ्समा उत्तम छुट्टीको लागि एक आदर्श विधि हो।
<< p> पाँच-स्टार रिसोर्ट परिसर हिन्द महासागरको मुटुमा अवस्थित छ - कान्छो र न्यानो संसार बीच। यस ठाउँमा, तपाईं अनौंठो उष्णकटिबंधीय बिरुवाहरूमा डुबाइरहेका निजी मेटिकल खलामा विश्रामको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
नजिकैको पनि शुद्ध पानीको साथ समुद्री किनार पनि व्यवस्थित गरिएको छ। त्यहाँ धेरै पोखरीहरू, टेनिस, समुद्र तटबल, खेल मैदान, साथै आधुनिक अरामी एसएम स्पा, जसले छोड्ने प्रक्रियाहरूको व्यापक सूची प्रदान गर्दछ। तपाईं एक "केरा" स्केटिंग, माछा मार्ने ठाउँ, डु boat ्गा, सवारी पानी स्कीइ or वा डाइभिंग सेन्टरमा जानुहुन्छ। स्वादिलो ​​खाना कोनोसेसस पनि खुशी हुनेछन्।
त्यहाँ इलाकामा धेरै रेस्टुरेन्टहरू र बारहरू छन्, जसमा तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय, एशियाली वा स्थानीय खानाहरूको लागि, जादू परिदृश्यहरूको आनन्द लिइरहनुभएको छ। केही प्रतिबन्धहरू प्रतिभाशाली संगीतकारहरू प्रदर्शन गरिन्छ, र लोकप्रिय कलाकार र djs पनि बोलेको छ संगीत द्वारा सुन्न सकिन्छ।
procly को आरामदायक टापुमा अवस्थित छ, राजधानीबाट टाढा छैन। यो एक ठाउँ हो जुन नवविवाहितहरू वा बच्चाहरूसँग बच्चाहरूसँग प्राय: छनौट हुन्छन्। यस क्षेत्रको नयाँ स्पामा तिनीहरू धेरै राम्रोता प्रक्रियाहरू प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन्, तपाईं मालिश कोठाको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, वाम्मोुटेरापीमा विशेष परिसरमा जानुहोस्। यहाँ तपाईं माल्दिभ्सको एक मात्र क्षेत्रमा गल्फ खेल्न पनि सक्नुहुन्छ।
साना पर्यटकहरूको लागि उत्कृष्ट अवस्था सिर्जना गरिएको छ: चिसो जोन वर्ल्ड बच्चाहरूको क्लब, जसमा यसले काम गर्दैन। Riques संस्थाहरू खुला छन्, जसले विश्वको विभिन्न भात्रालको भाँडाहरू, साथै सुगन्धित टेश र स्फूर्तिदायी पेय। सबै भन्दा राम्रो दृश्यहरू मजरीआ बार र समुद्र तटबाट खुला छन् - M-lough।
हालसालै, एक नयाँ अद्वित अद्वितीय रिजोर्ट टापु खोलिएको थियो। यसले आश्चर्यजनक पानारामिक दृश्यहरूको साथ 100 भन्दा बढी आरामदायी भित्ताहरू समाहित गर्दछ। जटिल अन्य रिसोर्टहरू भन्दा फरक छ र विशेष ध्यान पाउन योग्य छ। त्यहाँ भूभागको पानीमुक्तिको एक अद्वितीय संग्रहालय हो जुन नेश्वरी भौगोलिक विज्ञान संस्करणले संसारको सर्वश्रेष्ठ चमत्कारहरूमध्ये एक उत्तम आश्चर्यकर्महरू मध्ये एक हो। ठाउँको अर्को अंश सिरुरू fen fhusi हो - यो माल्दिभ्समा सबैभन्दा ठूलो लगून हो।
पाहुनाहरूको सेवाहरूमा: आधुनिक स्पा कम्प्लेक्स धेरै अद्वितीय स्वास्थ्य प्रक्रियाहरू, डाइभि , एक विशाल पोखरी, सबै स्वादको लागि भाँडाका साथै निजी परिष्कृत बीचको साथ। साना यात्रुहरूको लागि त्यहाँ विशेष खेल क्षेत्रहरू र बच्चाहरू क्लब छन्।
druxe बंगला (700 वर्ग।) - समुद्री बंगलाहरू अलग गर्नुहोस्। भित्री क्षेत्रको साथ बेडरूम समावेश गर्दछ, इनडोर र बाहिरी आत्माहरूको साथ बाथरूम, सूर्य लाउन्ज र समुद्री तटमा पहुँचको साथ एक बाथरूम समावेश गर्दछ। अधिकतम आवास - j वयस्कहरू वा2वयस्कहरू र 1 बच्चा।
1 B बिच भिला (966 वर्ग) - समुद्री तटमा अवस्थित समुद्री समुद्री भिलाहरू। तिनीहरू एक आयरको साथ एक बेडरूमको साथ बेडरूम समावेश गर्दछ, एक बगैंचामा एक बगैंचामा एक बाथरूम र एक बाहिरी स्नान, सूर्य लाउन्ज र समुद्रको दृश्यको साथ अधिकतम आवास - j वयस्कहरू वा2वयस्कहरू र 1 बच्चा।
prodw बीच भिल्लाहरू पोखरी (116 वर्ग) - पोखरी र समुद्री दृश्यहरूको साथ अलग समुद्री भिलाहरू। एक बेडरूम समावेश, नुहाउने र स्नान को साथ एक बाथरूम, बगैचा र हावा, बस्ने क्षेत्र, एक पौडी खेल्ने पोखरी संग एक स्नान। अधिकतम आवास - j वयस्कहरू वा2वयस्कहरू र 1 बच्चा।